Ujyaalo Sandesh | » कोरोनाविरुद्धको खोपको ‘सफल परीक्षण’ हुँदा घट्यो सुनको मूल्य ! कोरोनाविरुद्धको खोपको ‘सफल परीक्षण’ हुँदा घट्यो सुनको मूल्य ! – Ujyaalo Sandesh
कोरोनाविरुद्धको खोपको ‘सफल परीक्षण’ हुँदा घट्यो सुनको मूल्य !
उज्यालो सन्देश November 10, 2020
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा एकैदिन ३ हजार ४ सय रुपैयाँको गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार नेपाली बजारमा छापावाला सुनको कारोबार प्रतितोला ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सोमबार ९८ हजार २ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा यस्तो सुनको कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइहेको छ । अघिल्लो दिन ९७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अघिल्लो दिन १ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ रहेको चाँदीको भाऊ पनि घटेर १ हजार २ सय १५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
सुनको भाऊ यसरी घट्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोरोनाविरुद्धको खोपको सफल परीक्षण हुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । अमेरिकी–जर्मन स्वास्थ्य विज्ञले निर्माण गरेको खोप ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको खबरसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट देखिएको हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा परेको हो ।
नेपाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य र नेपालले सुन आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुललाई जोडेर नेपाली बजारको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो खबर फैलिएसँगै सोमबार अन्तराष्ट्रिय बजारमा १ हजार ९ सय ६३ डलर प्रतिऔंसमा खुलेको बजार १ हजार ८ सय ६२ डलर प्रतिऔसमा झरेर बन्द भएको थियो । मंगलबार भने यो मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएर कारोबार भइरहेको छ ।